Sabti, Jan 23, 2021-Wararkii ugu danbeeyay dagaal ka dhacay deegaanka Raage Ceelle ee gobolka Shabeellaha dhexe – LaacibOnline
Sabti, Janaayo, 23, 2021 (HOL) – Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa howlgalka midowga Africa AMISOM ayaa lagu waramayaa in ay dib ula wareegeen degmada Raage Ceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dagaal subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay degmada ayeey u suurtagashay xoogagga Al-shabaab in ay la wareegaan gacan ku heynta Raage Ceelle kaddib dagaal culus oo ay la galeen ciidanka dowladda Soomaaliya.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in ay howlgal ballaaran ka wadaan deegaannada ku hareereysay degmada lagu dagaalamay iyaga oo sheegay in ay baacsanayaan xoogaggii weerarka soo qaaday.
Al-shabaab ayaa lagu waramayaa in ay isku soo uruursanadeen qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe iyo bartamaha Soomaaliya oo ka baxsanaya duqeymaha joogtada ah ee diyaaradaha Mareykanku gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah deegaannada ay ku xooggan yihiin.
← Sabti, Jan 23, 2021-Puntland oo soo bandhigtay khasaaraha ka dhashay qarax lagu weeraray ciidamada amniga Gaalkacyo
Sabti, Jan 23, 2021-Larry King wariyihii caanka ahaa ee reer Mareykan oo geeriyooday →
Madaxweyne Farmaajo wuxuu si kalitalisnimo leh ugu tuntay dastuurka dalka
Sabti, Dec 12, 2020-Milatariga Mareykanka oo sii daayay muuqaal video ah oo ku saabsan duqeymo cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayay Al-shabaab ee Soomaaliya